Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokusho kochwepheshe ngale ndaba, España kuzoba ngelinye lamazwe kulo lonke elaseYurophu elizohlupheka kakhulu imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Uma kungathathwa zinyathelo ngokushesha, izinkinga ezinkulu zempilo kubantu, izinhlobo zezinto eziphilayo eziyingozi emvelweni zizokwakhiwa noma kuzoba nemiphumela emibi kakhulu kwi umkhakha wezomnotho wezwe.
1 Ukuguqulwa kwezilwane nezitshalo zezwe
3 Izinkinga zempilo
Ukuguqulwa kwezilwane nezitshalo zezwe
Omunye wemiphumela ephambili yokuguquguquka kwesimo sezulu inguquko etholwe yibo bonke izimbali nezilwane wezwe elimele. Kwaphela iminyaka embalwa, izinhlobo zezilwane ezinjenge I-grizzly usendleleni yokuqothulwa ngenkathi izihlahla zikakhokho Kungenye yezinhlobo ezihlupheka ngemiphumela yokushisa komhlaba futhi kulindeleke ukuthi lolu hlobo luzogcina lungasekho maphakathi nekhulu lama-XNUMX, okudala imiphumela emibi kwezomnotho kulo lonke elaseSpain.
Yize amaphesenti aphezulu emililo adalwe kuyo yonke indawo yaseSpain bacasukile ngenxa yokushiswa kwempahla ngezikhathi ezithile, ukwanda kwamazinga okushisa aphezulu kanye nokushoda kwemvula kuzothokozisa ngendlela eyingozi ukwanda kwemililo eSpain. Ngokusho kwedatha yakamuva, imililo ngokuya ngokungathi sína futhi ziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe uma kukhulunywa ngokubaminza.
Abantu abanemithombo embalwa yezomnotho bazohlushwa imiphumela yokuqhubeka amagagasi okushisa nokubanda ukuthi izwe lonke lizohlupheka. Kulokhu kufanele kungezwe ukwanda kwe- zonke izinhlobo zezifo kubangelwa izinhlobo ezinjengomiyane. Izifo ezifana umalaleveva ejwayelekile ezindaweni eziningi zase-Afrika izofika ezweni lethu.
Lezi ngezinye nje ze imiphumela emibi kakhulu wokushintsha kwesimo sezulu futhi lokho kuzothinta yonke indawo yaseSpain eminyakeni embalwa. Kungakho kubalulekile thatha isinyathelo ngokushesha, ukusiza ukumisa imiphumela engenzeka ngokushintsha kwesimo sezulu okusabekayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu eSpain